Tag Archive for "इन्स्टाग्राम" - फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्दै ओली सरकार ! के मार्क जुकर्बर्ग अनुमति माग्न नेपाल आउलान् ?
फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्दै ओली सरकार ! के मार्क जुकर्बर्ग अनुमति माग्न नेपाल आउलान् ?
काठमाडौं । नेपालमा दर्ता नगरे वा कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतवनीसहित फेसबुकको अमेरिकास्थित कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सूचना , प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको आग्रह अनुसार गृहले सामाजिक सञ्जाल फेसवुक र ट्वीटरलाई पत्राचार गरेको हो । गृहले फेसवुक र ट्वीटरको अमेरिकास्थित मुख्यालयलाई नेपालमा दर्ता गरेर कार्यालय नखोले फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सा... थप पढ्नुहोस्
भारत ।आर्यन खानको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भएको छ। शाहरुख खानका जेठा छोरा आर्यनले इन्स्टाग्राम एकाउन्टबाट आफ्‍नो फेसबुक ह्याक भएको जानकारी दिएका छन्। उनले फेसबुकबाट आउँने कुनै पनि पोस्ट, म्यासेजलाई ‘इग्‍नोर’ गर्नको अनुरोध गरेका छन्। इन्स्टामा स्टोरी शेयर गर्दै आर्यनले लेखेका छन्, ‘मेरो फेसबुक अकाउन्टबाट आएको कुनै पनि क्रियाकलापलाई बेवास्ता गर्नुहोला, अकाउन्ट ह्याक भएको छ।’२१ वर्षीय आर्यन खान बलिउडमा ... थप पढ्नुहोस्
नयाँ दिल्ली । तस्वीर तथा भिडियोका सेयर गर्नका लागि प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको भगिनी संस्था इन्स्टाग्राममा राजनीतिक नेताहरु मध्ये सवै भन्दा धेरै ‘फलोअर्स’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रहेको पाइएको छ । इन्स्टाग्राममा मोदीको १ लाख ४८ हजार ‘फलोअर्स’ रहेको पाइएको हो । संसार भरका नेताहरुको इन्स्टाग्राम मध्ये यो नै सवैभन्दा धेरै ‘फलोअर्स’ भएको देखिएको एक अध्ययनले जनाएको छ । मोदीपछि द... थप पढ्नुहोस्
इन्डोनेशिया : इन्स्टाग्राममा ‘बच्चा बेच्न राख्ने’ चार पक्राउ
काठमाडौं । इन्डोनेशियामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर बच्चाको अवैध व्यापार गर्न खोजेको आरोपमा चार जना पक्राउ परेका छन् । एउटा परिवार कल्याण संस्थाको नाममा खोलिएको इन्स्टाग्राम खातामा गर्भवती महिला, अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान र बच्चाहरूको तस्बिर प्रेषित गरिएका थिए। सुरबायाका प्रहरीका अनुसार ह्वाट्स्यापमार्फत् सम्पर्क गर्न भनेर सम्भावित ग्राहकलाई टेलिफोन नम्बर पनि उपलब्ध गराइएको थियो। प्रहरीका अनुसार बच... थप पढ्नुहोस्